Hlola Kuala Lumpur, Malaysia - World Tourism Portal
Hlola Kuala Lumpur, eMalaysia
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eKuala Lumpur.
Ongakwenza eKuala Lumpur, eMalaysia
Uhambo losuku kusuka Kuala Lumpur
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eKuala Lumpur
Bukela ividiyo ekhuluma ngoKuala Lumpur
Hlola uKuala Lumpur inhlokodolobha yezwe nedolobha elikhulu kulo Malaysia.
Ngokusho okusho ukuthi "ukuhlangana komfula odaka" ngesiMalay, iKuala Lumpur ikhule isuka edolobhaneni elincane lokulala elinemigodi ye-Chinese yaya edolobheni elikhulu eliphithizelayo le-7 million (idolobha elifanelekile labantu abangu-1.8 million) ngeminyaka eyi-150 kuphela. Imbiza yokuncibilika yamasiko amanye amahhotela ashibhile kakhulu e-5-star, ukuyothenga kakhulu, noma ukudla okungcono kanye nezinye izimangaliso zemvelo ngehora nje kuphela, leli dolobha elinamandla linokuningi okungakunikeza isivakashi ngasinye.
I-Kuala Lumpur idolobha elihlakazekile futhi amadolobha alo okuhlala abonakala sengathi aqhubeke unomphela.
Idolobha lingahlukaniswa ngezindawo ezilandelayo, ngayinye enikeza okukhangayo noma umsebenzi othile.
I-Old City Center / Idolobha Elidala (iChinatown) [akumele ididaniswe neKuala Lumpur City Center (KLCC)] - Lesi yisizinda sendabuko yeKL lapho uzothola khona isikhungo sangaphambili sokuphatha amakoloni-iMerdeka Square, iSultan Abdul Samad Building kanye neSelangor Club. Kubandakanya nesikhungo sakudala saseKuala Lumpur esidala saseChina esithe wonke umuntu usibiza ngokuthi yiChinatown kanye nemakethe emanzi yaphenduka isikhungo sezandla sezandla - iCentral Market Kuala Lumpur.
IGolden Triangle - Isifunda Sokuhweba Esikhulu se-KL (CBD), enyakatho-empumalanga yedolobha elidala / idolobha elidala. Yilapho uzothola khona uNdunankulu wesifunda sakwaBukit Bintang- KL, amahhotela anezinkanyezi ezinhlanu, amahhovisi, ubusuku bomsuka kanye nesithonjana iPetronas Twin Towers.
I-Tuanku Abdul Rahman / Chow Kit - Lokhu kunwetshwa kwesikhungo sedolobha elidala / idolobha elidala kusheshe kudume udumo lwalo lwakudala ngemuva kweminyaka eyishumi yokukhula kancane. Itholakala kwi-500 m enyakatho yeChinatown kanye ne500 m entshonalanga nePetronas Twin Towers, lesi yisifunda sendawo sokuthenga esimibalabala saseKuala Lumpur enyakatho enkabeni yedolobha esinyakazisa igiya eliphezulu lapho imikhosi kaHari Raya Puasa (Eid ul-Fitr) ne. Indlela ye-Deepavali. Itholakala eceleni kweGolden Triangle (umakhelwane osenyakatho) enezindawo eziningi ezidumile zesabelomali. Isikhungo esikhulu sePutra World Trade Center esinamandla amakhulu kanye nokudla kwendabuko kwaseKampung Baru kuphakathi kwezimpawu ezibaluleke kakhulu zomhlaba.
IBrickfields - Le ndawo, eseningizimu enkabeni yedolobha, yiLittle India yaseKuala Lumpur, egcwele izitolo ze-saree nezindawo zokudlela zamahlamvu esiga sikabhanana. Isiteshi sesitimela esisha sikaKuala Lumpur, iKL Sentral, sitholakala lapha.
I-Bangsar neMidvalley - Itholakala eningizimu yedolobha, iBangsar iyindawo yokudlela edumile ne-nightlife district ngenkathi iMidvalle ingenye yezitolo ezinkulu zedolobha ezidumile.
IDamansara neHartamas - Idolobha elikhulu kakhulu, lezi zifunda ezimbili ezisentshonalanga yomuzi wedolobha ezinye izikhwama zokudla zokudlela nezindawo zokuphuza. Lesi sifunda sihlangana nengxenye esenyakatho yePetaling Jaya.
I-Ampang - Itholakala empumalanga yedolobha, i-Ampang iyikhaya laseKunala Lumpur's Little Korea kanye namanxusa amaningi angaphandle.
Amaphethelo asenyakatho - Le ndawo enkulu enyakatho yedolobha iyikhaya lezimangaliso eziningi zemvelo, njengeBatu Cave, National Zoo kanye ne-Forest Research Institute of Malaysia.
Amadolobha aseningizimu - Lesi sifunda kungenzeka singabathandi kakhulu abahambi, yize iKuwaala Lumpur's National Stadium neNational Sports Complex uBukit Jalil nePutrajaya zitholakala lapha.
IKuala Lumpur inesimo sezulu sasehlobo esishisa bha sonyaka esishisayo esishisayo futhi esinelanga, kanye nemvula eningi. Kungana nemvula nsuku zonke ngesikhathi sonyaka osenyakatho-mpumalanga ukusuka ngo-Okthoba kuya kuMashi. Izinga lokushisa livame ukuhlala lihlala unyaka wonke futhi lihambahamba phakathi kwe-31 ~ 33 ° C (max. Izinga lokushisa) ne-22 ~ 23 ° C (amaminithi okushisa).
Izinhlelo zokuhamba zaseMalawi,, ngamazinga wesifunda, asebenza kahle kakhulu. Izindiza, izitimela, amabhasi, namatekisi kuxhunyiwe kuhlelo olukhiqizwayo futhi olwakhiwe, uma kungenjalo umakhi wokuthanda oda, okungenani i-amateur ezinikezele. Izinhloso zabahleli bohlelo olusezingeni eliphakeme kakhulu lwesimanje, olwenziwe ngesimo se-European, oluyisikhalo kude nokuqala kwedolobhana.
Uhlelo lokufisa lokuhamba komphakathi lukaKuala Lumpur luthuthukiswa ngokwanele ukuba lusebenze kahle futhi lube lula, kepha isikhala esiningi sokwenza ngcono sisekuhlanganiseni kwayo.
IKuala Lumpur inemigwaqo esezingeni eliphezulu nohlelo olubanzi lwe -wayway, kepha ukushayela edolobheni kungaba nzima ngezikhathi ezithile ngenxa yokugcwala kwethrafikhi, iwebhu eyinkimbinkimbi yemigwaqo nezimpawu zomgwaqo ngolimi lwendawo. Uma ushayela, qaphela ikakhulukazi ngokushintshwa kwemizila engazelelwe yezimoto, kanye nama-scooters, athambekele ekufikeni futhi kuphume ngokuphelele traffic.
Ukuqasha imoto kuyindlela yokuhamba eKuala Lumpur nakwezinye izingxenye zeMalaysia. Uhlelo lomgwaqo luyinkimbinkimbi kakhulu futhi izimpawu zomgwaqo zilulimi lwendawo, ngakho-ke kunconyelwa kakhulu ukuthi bonke abahambi baqashe amayunithi we-GPS enkampanini yabo yokuqasha izimoto - amayunithi anjalo atholakala kabanzi, futhi ngokuvamile anikezwa ngamanani afanele. Abashayeli bangasebenzisa futhi izinhlelo zokusebenza zokuzula njenge-Google Amamephu noma i-Waze ukuzungeza.
Izindleko zikaphethiloli nezokupaka imvelo ziphansi kakhulu, okufaka isandla enkambisweni yezimoto eKuala Lumpur ekhulisa ukuxinana kwezimoto. Kodwa-ke, kungaba ukuhlakanipha ukuphatha ikhadi elilayishiwe leTouch 'n Go njengoba abashayeli kungenzeka bacelwe ukukhokhela abakhokhintela emigwaqweni. Imali ayemukelwa kwamanye amaplaza akhokhisa ngokuphelele. Amacala weCongestion awatholakali eKuala Lumpur.
Qala eChinatown (Petaling Street)
Yibhekise eceleni komugqa wesakhiwo weMaybank. Qondana no Jalan Pudu, udlula kwesobunxele kwesiteshi sebhasi iPudu Sentral. Ngemuva kwe-800 m, vula uJalan Bukit Bintang eRoole Bintang Hotel.
I-Jalan Bukit Bintang iyindlela enkulu yokuthenga: yima ikofi eBintang Walk, noma uhlole i-mega-mall, ePlaza Low Yat.
Lapho uBintang ehlangana noJalan Sultan Ismail kanye ne-monorail, jikela kwesobunxele, kulandela i-monorail.
Ngemuva kwe-1km yeSultan Ismail, jikela ngqo kuJalan P. Ramlee. Lokhu kuholela kuPetronas Twin Towers. Mangale!
Qondisa ikhanda emuva uJalan P. Ramlee
Hlangana noJalan Raja Chulan eduze kwe-KL tower bese ubuyela esakhiweni saseMaybank naseChinatown.
Uma unenhlanhla ngokwanele ukwenza lokhu ukuhamba ngeSonto ntambama ntambama uzothola idolobha elizolile futhi lihle.
I-KL isingethe izinhlobonhlobo ezinhle zokujabulisa okwakhiwe. Izakhiwo ezinkulu kakhulu zamakholoni aseBrithani ezindala zisenkabeni yedolobha futhi zifaka namahhovisi angaphambili e-Colonel Secretary (manje yiSultan Abdul Samad Building) eMerdeka Square kanye nesiteshi esidala saseKuala Lumpur Railway. Baxubanisa izingqikithi kusuka ekwakhiweni kwezakhiwo zaseBrithani naseNyakatho ne-Afrika. Ngasohlangothini olusentshonalanga lweMerdeka Square, kubukeka ngathi ukufakelwa okwenqatshelwe ngqo kusuka eStratford-on-Avon yiRoyal Selangor Club. Eduze neMerdeka Square kuneMasjid Jamek, mosque enhle yamaMoorish ebekwe lapho kuhlangana khona noMfula iKlang. I-National Mosque, iMasjid Negara, (1965) igubha izifiso ezigqamile zeMalawi esanda kuzimela. Isikhumbuzo seNational National in the Lake Lake Gardens siphefumulelwe yisikhumbuzo se-Iwo Jima e-Arlington, eVirginia. Ingadi ebunjiwe yase-ASEAN iseduze. Futhi ezivandeni echibini kukhona iCarcosa Seri Negara, indawo eyayikade ihlala kuyo iKhomishani Ephakeme yaseBrithani, manje enamagumbi aphezulu wehhotela namakamelo wetiyoloni. Ngenkathi ezinye izakhiwo eziseGolden Triangle ezikhuphuka ngokwedlulele, njenge-KL Tower, zingamakhophi angenazo ezinye zezakhiwo ezidumile, abakwaPetronas Twin Towers bamangalisa ngempela.
Ngaphakathi enkabeni yedolobha kubuye kube nemigwaqo emincane emincane yaseChinatown, isifunda sendabuko sokuhweba saseKuala Lumpur, enezitolo zayo eziningi nezindawo zaseChina.
Futhi uma ufuna okuthile okuyiqiniso ngokwedlulele, bese uziqondisela kuKampong Bharu (esivame ukubizwa ngokuthi “Kampung Baru”), eyi-1 yedolobhana lokugcina elisindayo laseMalay maphakathi ne-KL. Lapha, uzokwazi ukubona umbono wendlela yokuphila yesiMalay engokwesiko futhi ubone izindlu eziningi ezinhle zaseKampung ezisalondolozwe kahle.
I-KL iyashisa, inomswakama futhi kwesinye isikhathi igcwele, ngakho-ke hlela okunye ukupholisa ezindaweni zokuthenga noma ezinendawo yokudlela enomoya. Ungathola ukuthi izinto eziningi ezikhangayo ziminyene kuphela ngezimpelasonto nangamaholide futhi zilahlwe ngenye indlela phakathi nezinsuku.
I-KL yaziwa ikakhulukazi ngokudla kwayo nokuthenga, okumbozwe ngokwanele yizigaba ze-Eat and Buy.
Eminye imisebenzi ifaka phakathi imidlalo ejwayelekile yasemadolobheni enjengegalufu, ibhayisekili, ukugijima, ukugijima kanye nokugibela amahhashi. Uma ungena ekukhuphukeni kwamatshe, ama-Batu Cave asedolobheni elisenyakatho adumile. Noma ngabe unikezwe indawo enhle yaseMalaysia, kungcono uphumele kwezinye izindawo ukuze uthole noma yini okunzima noma inselelo.
Amathiyetha amaningi amahle namahholo okusebenza kuye kwavela njengengxenye yomshini weMalaysia wokukhuthaza ukubonakaliswa okukhulu kwamasiko. Lokhu kufaka phakathi iNational Theatre (Istana Budaya) kanye neKL Performing Arts Centre (KLPac) engxenyeni esenyakatho yedolobha, iKL Philharmonic eTwin Towers, kanye ne-Actors Studio eLot 10.
Iminyuziyamu ehamba phambili enkabeni yedolobha iMnyuziyamu Kazwelonke, ehlanganisa umlando walesi sifunda, kanye nomnyuziyamu wezobuciko obizwa kahle wamaSulumane, oqukethe iqoqo elincane kodwa elijabulisayo. I-Bank Negara Malaysia Museum and Art Gallery iyimnyuziyamu yesimanje exhunywe ebhange lelizwe lonke ngemiklamo eyakhiwe kahle ekuthuthukisweni komnotho waseMalawi, ezezimali zamaSulumane, umlando webhange eliphakathi, kanye namabhange ezwe lonke aqongelela ubuciko.
Ukupaka kanye nama-spas kungatholakala emahhotela ambalwa anezinkanyezi ezinhlanu nezikhungo ezizimele eGolden Triangle. Kukhona futhi ama-parlors wezipikili nobuhle, okuvame ukuthi kube yinzuzo enhle, kukhona neyokugcina ephezulu enikeza izinsizakalo ezifanayo zeprimiyamu. I-Reflexology nezindawo zokuzivocavoca ngezinyawo zikuyo yonke indawo, ikakhulukazi eBukit Bintang eGolden Triangle naseChinatown.
UKuala Lumpur futhi unamapaki wengqikimba eminingana ezungeze idolobha nasemadolobheni aseduze. Okudume kakhulu kulezi ziqiwu yiSunway Lagoon esisedolobheni elingumakhelwane iSubang Jaya. Ipaki yengqikimba inamahhashi, ipaki elikhulu lamanzi, ipaki eyedlulele yama-junkies we-adventure, ipaki yokukhalela labo abafuna ukwesatshiswa okuhle, ne-zoo yezilwane ezifuywayo. ISunway Lagoon iyimizuzu eyi-40 yokushayela ukusuka enkabeni yeKuala Lumpur kumgwaqo omuhle kakhulu.
I-Skyscraper Gazing - ingilazi nensimbi kuvamile, kepha kukodwa kuphela (kunalokho kubhangqa). Kodwa-ke, ukubuka okuvela kuMbhoshongo we-KL kushibhile futhi kungcono kunalokho okuvela kuTwin Towers.
Isipiliyoni somlando we-KL idolobha sibuka i-MUD yomculo.
Ngenkathi i-KL ingaphezulu kwehlathi lokukhonkolo uma liqhathaniswa nezinye izingxenye zezwe, kukhona amagugu wemvelo atholakala ezokuthutha zomphakathi. Phakathi kwazo kukhona:
I-FRIM Forest Reserve: Ungafika e-FRIM nge-KTM Komuter. Yima eKepong noma eKepong Sentral bese ubamba uhambo olude lwetekisi. Izinkaba zilula futhi ungakhuphuka nge-canopy walkway ye-RM10.60 ukuthola umbono omuhle we-KL ngosuku olucacile. Kunomuzi omuhle wetiye kwisakhiwo se-FRIM lapho ungasampula khona izinhlobo ezahlukahlukene zamathiphu wasendaweni kanye nemililo. Fika lapho kusenesikhathi njengoba kungenzeka ukuthi lina ngokuhamba kwesikhathi ngosuku.
I-KL Forest Eco Park: Phambilini ibibizwa nge- "Bukit Nanas Forest Reserve", leli hlathi lasemadolobheni liseduze ne-KL Tower. Ihlathi lihlinzeka ngohambo olulula ongalujabulela ngokwakho; kodwa izinhlobonhlobo eziningi kungenzeka zaziswa kakhulu ngohambo oluqondisiwe lwamahhala futhi lungahlelwa kusuka ku-KL Tower.
I-Natural Escapes Malaysia iyiwebhusayithi enhle yemininingwane eminingi emizileni yemvelo etholakala ngaphakathi noma i-drive iDemo kude ne-KL.
I-KL bird Park (i-free-flight-walk-in aviary), i-920, i-Jalan Cenderawasih, i-Taman Tasik Perdana (Eceleni kwe-Islamic Art Museum eCity Center. I-9AM-6PM. Indawo enhle yasendaweni yasendle yezinhlobo eziningi ezahlukahlukene zezinyoni zase-Asia. I-bird Park ikuvumela ukuthi usondele eduze kwezinyoni eziphuphuthekelayo kodwa ezingazesabi izithombe ezinhle kakhulu. Kuyabiza kancane, kepha kwenza usuku oluhle lube sendaweni enomthunzi kakhulu. Okuphakelayo nemibukiso usuku lonke kunika okuthile bona nganoma yisiphi isikhathi, futhi i-20 + acres ihlinzeka ngendawo eningi ongahamba kuyo futhi uyihlole. Iphephabhuku lesithombe linikezela ngohlu oluningi lwezinyoni ezihlanjululwe eziyohlala phezu kwakho zijabule futhi zifake izithombe ngentengo encane. Izithsaba zemvume zithengiswa ngentengo efanelekile futhi zinikele iziphuzo, u-ayisikhilimu, njll.
Eduze kwe-KL Convention Center kune-Aquaria KLCC equkethe ezinye izinhlobo ze-5,000 zezinhlanzi zasezindaweni ezishisayo.
Ukuthenga eKuala Lumpur kungenye yezinto zobumnandi obukhulu bokuhamba! IKuala Lumpur iyodwa inezitolo ezinkulu ze-66 futhi ithathwa njengenye yezindawo ezinkulu zokuthenga zase-Asia. I-KL futhi iyindawo yokuthengisa nokuthengisa yemfashini yaseMalawi. Izimpahla ziyatholakala kuwo wonke amabakaki entengo. ukuyothenga eKuala Lumpur
Ukuthi udlani futhi uphuze kuKuala Lumpur
Izindawo zokudlela ze-inthanethi ziningi kakhulu kuKuala Lumpur futhi ungazithola ezindaweni zokuthenga eziningi. Amahhotela amaningi ahlinzeka ngokufinyelela kwe-inthanethi kwamahhala nokuxhumeka. I-Wi-Fi yamahhala iyatholakala futhi ezindaweni zokudlela eziningi zekhefi, izindawo zokudlela nezindawo zokuthenga.
Amanzi empompo eKuala Lumpur acindezelwa kakhulu futhi aphephile, kodwa ngeshwa amapayipi awaphethe kungenzeka angabi njalo. Abantu bendawo abaningi bayayibilisa noma uyihlunge ngaphambi kokuyisebenzisa; ngaphandle kwalokho, amanzi asemabhodleleni ashibhile futhi ayabizi.
IGenting Highlands - Amaminithi we-40 ngomgwaqo ku-East Coast Highway, unesimo sezulu esipholile, izihloko zamapaki wezingane nekhasino yabadala. Itholakala kalula ngamabhasi asuka KL Sentral.
I-Putrajaya - Isikhungo esisha sokuphatha sikaMalgic Megalomanic yi-30 km eningizimu (i-20 min ngesitimela se-KLIA).
Kuala Selangor - I-1 hr enyakatho nentshonalanga yeKuala Lumpur, iyaphawuleka ngezicishamlilo zayo ezivutha bunye, kanye nezindawo zokudlela zasolwandle.
Klang - idolobha laseRoyal langaphambili elinezakhiwo ezimbalwa zokudlela zakudala nezindawo zokudlela.
ISungai Tekala Recreation Park - 40 min eningizimu yeKuala Lumpur (eduzane nedamu leSemenyih Hulu Langat District) iyipaki yokuzijabulisa eyintandokazi yokuhamba ngehlathi elihamba ngezinyawo ukhonkolo kanye nezimpophoma zemvelo ezilungele imindeni.
IPulau Ketam (Isiqhingi saseCrab) - ngasemfuleni uMfula iKlang kanye nezindawo zalo zokudoba zaseChina zenza uhambo olujabulisayo losuku. Thatha isitimela ePort Klang bese isikebhe siye esiqhingini.
IMalacca - uma unezinsuku eziningi ongazisebenzisa eMalawi, ukuvakasha okuvunyelwe yidolobha elingumlando laseMalacca, okungenye yezindawo zamagugu omhlaba ze-UNESCO. Njengoba umatasa nomlando wesikhathi sawo sobuDashi, wamaPutukezi kanye nawaseBrithani, uzothola leli dolobhana ligcwele emasikweni nasemlandweni.
IPenang - Inhlokodolobha yaseGeorge Town yedolobha lasePenang, ingesinye seziza ezingamagugu zomhlaba ze-UNESCO. Yaziwa ngokudla kwasemgwaqweni okuyiqiniso futhi okubizwa nge- “Paradise's Food Paradise”, uBaba Nyonya Peranakan cuisine, kanye ne-laksa, okuyindawo yale ngxenye yeMalaysia. Okunye okungafanele ukuthi kungaphuthelwa amabhishi abo angamaphayona nePaki Likazwelonke elincane eMalaysia.
Ipoh - imizuzu ye-90 ngesitimela se-cuisine, ipaki yetimu yamanzi, iziphethu ezishisayo, imbali yaseRafflesia, imihume nezakhiwo zamakoloni.
ICameron Highlands - ecishe ibe yi-200km ukusuka eKuala Lumpur noma 85km kusuka e-Ipoh, inikeza isimo sezulu esipholile nezindawo ezithandekayo eziphakemeyo. Uzokwazi ukuvakashela amasimu wetiye, amapulazi emifino, amapulazi e-sitrobheli namakhaya okuhlengwa, kanye nokugcoba emlandweni wamakoloni waleli thafa. Amakamelo okoloni kanye nama-bungalows kanye namahhotela anamuhla, izindawo zokungcebeleka nokubuyiselwa ezintabeni okunethezeka kungatholakala lapha. Ukubuka izinyoni, ukuhamba kwehlathi kanye neminye imisebenzi engaphandle kuyatholakala.
I-Taman Negara National Park - Ipaki yezwe enkulu kunazo zonke ePeninsular Malaysia, eyaziwa ngokuhamba kwayo okuhle ehlathini nezinhlobonhlobo zezinyoni nezinambuzane.
EPort Dickson- Idolobha lamasosha aseMalawi. Ibamba izindawo eziningi zokungcebeleka zasolwandle ezifanele ukuthola ukuhamba kwempelasonto.